ဗျူရိုကရေစီစနစ်အတွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ပြောင်းလဲမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ “ဆင့်ကဲချဉ်းကပ်မှု” တစ်ရပ်က အစိုးရစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအတွက် လက်တွေ့ကျသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဟင်းနရစ်ဒါဟမ် ရေးသားသည်။ အစိုးရစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအား ကြောက်စရာကောင်းသော လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် နားလည်ထားကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုယ်စားပြုလေ့ ရှိပြီး ထိုသို့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်.
ထိုင်းသံမဏိလုပ်ငန်းကြီး၏ ပြောကြားချက်ကို သီလဝါဇုန် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ပြန်လည်ငြင်းဆို
ရန်ကုန် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိ ၎င်းတို့စက်ရုံလည်ပတ်ခွင့် မရရှိသေးသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ နှောင်းနှေးကြန့်ကြာပြီး ဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ထိုင်းသံမဏိလုပ်ငန်းကြီး၏ ပြောကြားချက်ကို သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ပြန်လည် တုန့်ပြန်ပြောကြားလိုက်သည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကုမ္ဗဏီကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဆိုသည့် Millcon Steel Plc ၏ ပြောကြားချက်ကို ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ဘန်ကောက်ပိုစ့်သတင်းစာထံ ပေးပို့ခဲ့သည့် စာထဲတွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆက်အောင်က ငြင်းဆိုထားသည်။ စက်ရုံလည်ပတ်ရေး နှောင့်နှေးနေမှုကြောင့် Millcon အနေဖြင့် ဘတ်ငွေ.
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို လူသစ်များဖြင့် အစားထိုးမည်
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားထုညီလာခံ ခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်နေပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများထံ လွဲပြောင်းပေးမည်ဟု ၎င်းတို့ကဆိုသည်။
ရန်ကုန်က ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံစီမံကိန်း မရေမရာ ဖြစ်နေ
နေပြည်တော်၊ မေ ၅ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ဆောက်မည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀ တန် အငြင်းပွားဖွယ် ဆေးရုံစီမံကိန်းအား ဆက်လက်ခွင့်ပြုသင့်မသင့်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မကြာမီ ဆွေးနွေးတော့မည် ဖြစ်သည်။ The Parkway Yangon Hospital အား ရန်ကုန်အထွေထွေဆေးရုံကြီးအနီး ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ မြေ ၄ ဒသမ ၄ ဧကအကျယ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ရန် လျာထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘီအိုတီစနစ်ဖြင့်.
ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲ ဆန္ဒပြနိုင်မည့် ဥပဒေကြမ်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ တင်ပြ
ဒီဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ခံဆွေးနွေးဖို့ လွှတ်တော်က သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
မူလကော်မတီဝင်တွေပါတဲ့ အရေးပေါ်ညီလာခံ ခေါ်ပေးဖို့ ထုတ်ပယ်ခံရသူများက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို ထပ်မံ တောင်းဆို
ပြီးခဲ့တဲ့လနောက်ဆုံးပတ်ကပြုလုပ်တဲ့ ပထမအကြိမ်ရှင်းလင်းပွဲမှာ သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်း ပါတီကတရားဝင် မတုံ့ပြန်သေးပါဘူး